Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.
Kamshaa Akkaataa Sarara banuuf sajoo kana, iddoo akkaataa sarara handaaraa fooyyessuu dandeessutti cuqaasi.
Sajoo Halluu Sarara (kan handaaraa) kamshaa Halluu Handaaraa banuuf, isa halluu handaara wantaa jijjiiruf si dandeessisu cuqaasi.
Halluu Sarara(kan handaaraa)
Sajoo Handaarota kamshaa Handaarotaa banuuf, iddoo bal'ina handaara waraqaa ykn wantaa fooyyessuu dandeessa.
Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.
Qabeentaa mandhee gabatee filamee gara mandhee tokkootti walitti maka.
Mandheewwan Adda Baasuu
Kamshaa faankishinoota guutola tarreewwanii fi tarjaaleef gabatee keessatti qabatu bani.
Qabeentaa mandhee gara gubbaa mandheetti hiriirsa.
Qabeentaa mandhee gara jala mandheetti hiriirsa.
Gabatee keessatti, tarreewwan tokko yk tokko chaalan saaga. Qaaqa (Gabatee - Saagu - Tarreewwan filachuun), kana banuun tarree tokko chaalan yk sajoo cuqaasuu kee dura, tarree tokko chaalan filachuun saaguu nidandeessa. Toftaan lamattaa, akka xabboon tarreewwan filatamaniitti, tarreewwan hojjaan saanii walfakkaatan saaga.
Filannoo booda, gabatee keessatti tarjaawwan tokko yk tokko chaalan saaga. Qaaqa (Table - Insert - Columnsfilachuun), kana banuun altokkoon tarjaawwan hedduu yk sajoo cuqaasuu kee dura, tarjaawwan tokko chaalan filachuun saaguu nidandeessa. Toftaan lamattaa, akka tarjaawwan filatamaniitti, tarjaawwan bal'ini saanii walfakkaatan saaga.
Gabaticha irraa, torraa(wwan) filatame haqa.
Gabatee irraa tarjaa(wwan) filataman haqa.
Amalawwan gabatee filatamee ifteessa, fakkeenyaaf, maqaa, hiriira, addaan fageenya, bal'na tarjaa, handaaraa, akkasumas duubbee ifteessa.
Keewwatoota filataman foo'a, yk tarreewwan gabatee, haala aabaatiin yk lakkoofsaan tarreessa. Hamma qabduuwwan sadi'itti qabduuwwan foo'a, akkasuumas qabduuwwan foo'a haala aabaatiif lakkoofsa maku, qindeessuu nidandeessa.
Faankishinii ida'aa kakaasa. Qareen man'ee, bakka ida'aan akka mul'atu barbaaddu keessa ooluu akka qabu beeku qabda.
Title is: Kabala Gabatee